Izicathulo zamadoda ezenziwe ngemfashini ekwindla 2016: yiziphi izicathulo zezicathulo zesilisa ezisuka kuPaolo Conte ezifanele kule nkathi
Amadoda wanamuhla ajwayele izithombe eziphathekayo, ezisebenzayo nezikhululekile. Yingakho abameleli besigamu esiphezulu sobuntu balandela imithwalo yemfashini ngaphandle kokusebenza kakhudlwana kunabesifazane. AmaDandi asemadolobheni athambekele ekusebenzeni, ukubheja kumathrendi wamanje kuzo zonke izakhi zesitayela sabo. Bafuna ngokukhethekile ukukhetha izicathulo: akusho nje kuphela izici zebhizinisi zendoda, kodwa futhi uyaduduzeka.
Izitayela ezibalulekile emhlabeni wezicathulo zabantu
Ngakho-ke, yini ekuboneni lokhu kuwa? Iziphi izicathulo zokuzikhethela umsebenzi, uhamba ngaphandle kwedolobha, ukwakheka kwezithombe zentando yeningi ngesitayela esivamile? Amadoda angakhetha izicathulo ezihlanganisa ngokuvumelana:
Izicathulo zamadoda nezicathulo zenziwa ngezindlela ezihlukahlukene zokuhumusha. Iningi lamamodeli awazange agqamile futhi agqoke ekwindla. Amafomu, ama-shades namajamo ngokuvamile akalindelekile. Ngesikhathi esifanayo, izinga lezicathulo zabadwebi lenzelwe imininingwane yokuhlobisa yamamodeli. Lokhu kwehla, njengenhlawulo, ekuphakameni kwezokuthandwa kuyi-classic, ngoba amadoda eningi anjengokuhlala njalo. Kodwa-ke, amamodeli wendabuko akhuliswa ngendlela entsha. Baye baqala ukuphila impilo entsha, bethola ukuthungwa kokubulawa kanye ne-chic yesimanje.
I-shadow shades of autumn 2016 ezicathulweni zamadoda
Izicathulo zamadoda ekwindla 2016 zithatha ukuhlukahluka kwemininingwane kanye nemibala eminingi. Ukusebenza kombala kule nkathi kushaya kakhulu kunokuhlukahluka nokujula kwayo. Kukhona ukwenqatshwa kweminye "shayela" ngamabomu. Amamodeli akhiwa ngamathoni agcwele, avinjelwe futhi alula. Imibala ehambisana kakhulu yilezi:
Ngendlela, kubalulekile ukushiya umphumela "izicathulo" zokuthi awusasebenzi. Amadoda atuswa ukuba anikeze okuthandayo kumamodeli ngomphumela wokuguga omuhle nokubonakalayo. Futhi wamukelekile ukuhlanganisa amathoni amaningana ngaphakathi komkhiqizo owodwa. Izisusa ezinjalo zibukeka kahle, zifashini futhi zisebenza kahle. Kodwa-ke, abameleli besigamu esinamandla kuzodingeka bathole ikhono lokuhlanganisa lezi zinhlobo zezicathulo emigodini yabo ekwindla.
Ukuhlobisa okucacile kwezicathulo zabantu - inombolo yethando 1
Enye indlela ehamba phambili yezicathulo zesilisa ukulahlwa kwezingcingo eziqoshiwe, ngamabomu namajamo ngamabomu. Abathandi bezithombe banikezwa onobuhle nezithombe ezinhle. Ungamnaki ukuhlobisa, ngoba ukuhlobisa kuyisibonakaliso esiyinhloko sezinhlobo zangempela zezicathulo. Ngo ekwindla ngo-2016 ekuthambekeni kwezicathulo zabantu nge:
Zonke lezi zindlela ezizungezile ze-autumn zifakwe kwiqoqo elisha lezicathulo ezivela ku-Paolo Conte. Kwaqoqwa iqoqo eliyingqayizivele, elingabonakali nje izitayela ezihamba phambili zendlu yaseYurophu, kodwa futhi izici zomuntu ngamunye wePaoloConte uqobo.
Izicathulo zekhwalithi zamadoda asebenzayo
Uphawu lwasekhaya uPaolo Conte linikeza abathandi bemfashini, induduzo nokusebenza ngezindlela ezahlukene ezihlukahlukene zezicathulo, okwenziwa ngesikhathi esisodwa elula futhi enhle. UPaoloConte udala izicathulo zamadoda, uthembele emisha kanye nobuchwepheshe obuphambili embonini yezicathulo. Ngaphezu kwalokho, wonke amamodeli akhiwa ngokuphelele ngezinto zemvelo. Umkhiqizo owaziwayo usebenzisa kuphela i-hardware ephezulu. Yingakho izicathulo ezivela kuPaolo Conte zikhethwa amadoda azisa isitayela, ukufaneleka, kanye nokusebenza kalula. Lokhu kuwa, izitayela ziye zavela emhlabeni wezicathulo zabantu, ezindlela eziningi ezihambisana nezindlela eziholela emfashini yabesifazane. Lokhu kuyisilwane kanye ne-floristics. Ikakhulukazi imfashini yizinguqulo ezinokugqamile, ezikhanyayo, ezimibalabala. Izicathulo zamadoda zingase zisekelwe:
Ukuqala kanye nenhle kuqoqo elisha lezicathulo uPaolo Conte
Ukuhlobisa kwangempela kuvumela abamele iqhaza eliqinile ukuba bagcizelele ubuntu babo nesitayela. Amadoda aseBrutal, amadandi asezindaweni zasemadolobheni kanye nabadlali bezemidlalo chic ngokuqinisekile bayakwazisa ukusebenza kwezicathulo ezihlukahlukene futhi ezihlukahlukene emqoqweni wamadoda amasha avela kuPaolo Conte. Amamodeli angenawo wonke umuntu ahlangene ngezinguqulo ekusebenzeni kwezemidlalo nokuhlukahluka kobuciko.
UPaolo Conte akagcini nje ngokuthembela ekwakhiweni kwesitayela nesimanje sezinsipho zabantu. Kuqoqo elisha lomkhiqizo, imodeli ngayinye yaba yindlela yokufaniswa kwekhwalithi, okusebenzayo kanye nenduduzo. Ukusetshenziswa kwempahla yemvelo, ukufakwa kwekhwalithi, imiklamo ekhululekile kanye nemikhuba yangempela yenza ukuqoqa izicathulo zesilisa kusuka kuPaolo Conte okhethekile.
Akumangalisi ukuthi izinhlobo ezinjalo zezicathulo zingabizwa ngokuphepha emhlabeni wonke. Lesi yisisekelo esihle kakhulu sokugqoka izigqoko eziyisisekelo zomuntu wanamuhla. Ku-Paolo Conte ugcina ungathola izicathulo ezizoba yizindlela ezihle kakhulu zansuku zonke, ukugcoba, isithombe sebhizinisi somuntu, okuvumela ukuba i-autumn ensemble izuze ubuhle nobuhle.
Indlela yokukhetha i-clutch efanele ngakwesokunene: le mithetho engu-4 izosiza ukuthi ingaphutha!
Ungathanda kanjani futhi umyeni wami
Oatmeal nge nutmeg
Ukuvimbela izifo ezithathelwana ngocansi ekuziphatheni kobulili okungavimbelwe
Indlela yokudala isaladi elula ne-crab meat?
UJulia Proskuryakova ubonise isithombe esingaphumeleli sikaDarya Pynzar
I-Spaghetti ne-tomato sauce
Ukuxilongwa kwekhompyutha yesimo sezinwele